Wasiirka Haweenka Soomaaliya oo Sweden booqaneysa – Radio Muqdisho
Wasiirka Haweenka Soomaaliya oo Sweden booqaneysa
Wasiirka wasaarada haweenka iyo xuquuqul insaanka Soomaaliya marwo Sahra Maxamed Cali Samatar iyo wafdi ay hogaamineyso ayaa booqasho rasmi ah uga bilaabatay maanta wadanka Sweden ka dib markii ay casuumaad ka heshay dowlada Sweden.
Wafdiga ay hogaamineyso Wasiirka haweenka iyo arimaha xuquuql insaanka Marwo Sahra Maxamed Cali ayaa waxaa si diiran u soo dhaweeyey jaaliyada Soomaaliyeed magaalada Stockholm, waxaana booqashadeeda oo qaadan doonto mudo sedex cesho ah ay la kulmi doontaa Wasiiro iyo qaar ka mid ah madaxda qaabilsan xafiisyada arimaha haweenka iyo xuquuql insaanka si loo xoojiyo xiriirka labada dal maadaama dowlada Sweden ay si weyn ay kaalmo ugu bixiso sidii loo horumarin lahaa haweenka iyo dhalaanka.
Wasiirka Wasaarada Haweenka iyo Xuquuql Insaanka Marwo Sahra Maxamed Cali Samatar oo la hadashay warbaahinta Qaranka ayaa ka warbixisay booqashadeeda.
“Waxaan maanta joogaa Sweden Stockholm oo aan u imid jaaliyadda Soomaaliyeed waana ku faraxsanahay sida diiran ee la ii soo dhaweeyey. Safarkeyga muhiimadiisa koowaad waxa ay tahay in jaaliyada Soomaaliyeed ay sweden aysan marti ka noqon dalkooda oo ay ku soo laabtaan arkaana marxalada, waxaan mareynaa marxalad uu wadanku diyaar u yahay horumar dhaqaale, caafdimaad, waxbarasho iyo nabadgalyo. waxaa kale oo safarkeyga ku jira casuumaad aan ka helay dowlada Sweden, iyada oo mar walba sidii buruburka u dhacay caawinaad diyaar noola ahaa, hadana in si gaar ah wasaarada haweenka iyo xuquuqul insaanka in ay furaan caawinaad ka sii fog sidii hore oo deg deg ah”.
Dhinaca kale Gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed ee Sweden ee Xaawo Taako Marwo Sahra Barqadle oo si gaar ah u xiriirineysa booqashada Wasiirka Haweenka iyo Arimaha xuquuql insaanka ayaa tiri.
”Run ahaantii aad ayaan ugu faraxsanahay in ay nala joogto wasiiradeena , waxa ay u timid shaqo wasaarada arimaha dibada Sweden ayaa casuuntay iyo ururka Xaawo Taako jaaliyadaha dhamaantoodna wey soo dhaweeyeen”.
Kulan loo hadlay hormarinta waxbarashada Baraawe oo Muqdisho lagu qabtay